चरम निराशा बढेपछि नयाँ शक्ति छाड्नेहरुको लर्को « Pahilo News
चरम निराशा बढेपछि नयाँ शक्ति छाड्नेहरुको लर्को
प्रकाशित मिति : 28 June, 2017 11:03 am
१४ असार । डा. बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) परित्याग गरेकै बेलादेखि उनलाई काँध थाप्दै आएका नयाँ शक्ति, नेपालका प्रभावकारी नेता देवेन्द्र पौडेलले माओवादी केन्द्रमा फर्किन सो पार्टीका नेताहरुसँग घनीभूत छलफल गर्न थालेपछि उनलाई डा. भट्टराईले केही दिनका लागि जापान पठाएका छन् । तर, नयाँ शक्तिको जापान शाखाको अधिवेशनका लागि गएका पौडेल माओवादी केन्द्रमा फर्किने हल्ला भने चल्न छाडेको छैन ।
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा नयाँ शक्तिले सर्मनाक पराजय बेहोर्नु परेपछि र माओवादी केन्द्र तेस्रो शक्तिको रुपमा देखिएपछि पौडेलले माओवादी केन्द्रमा फर्किने मनस्थिति बनाएका थिए । उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई एकाध पटक भेटेर कुराकानीसमेत गरेका थिए । आफूलाई माओवादी केन्द्रले राम्रो स्थान दिए फर्किने कुरा उनले प्रचण्डसामु राखेका थिए । उनले प्रचण्डसामु ‘नयाँ शक्तिले गरेर नखाने भयो’ भन्ने आशय व्यक्त गरेको बताइन्छ । त्यसपछि अध्यक्ष प्रचण्डले गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पौडेलसँग कुराकानी गरेर फर्काउने जिम्मा समेत दिइएको बताइन्छ ।
तर, पौडेलले माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँगको भेटघाटलाई बाक्लो बनाएको थाहा पाएपछि डा. भट्टराईले उनलाई मनाउन हरेक प्रकारको कोसिस गरेको बताइन्छ । नयाँ शक्तिको संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका पौडेललाई आफूलाई आएको निम्तोमा डा. भट्टराईले जापान पठाएको बुझिएको छ । गएको शनिबार जापानमा हुने अधिवेशनका लागि डा. भट्टराईलाई बोलाइएको थियो । तर, पौडेलले आज नै, भोलि नै माओवादी केन्द्रमा जान खुट्टा उचालेपछि डा. भट्टराईले पौडेललाई सो अधिवेशनका लागि जापान पठाएको बुझिएको छ ।
अर्कोतिर नयाँ शक्तिका नेता–कार्यकर्ताहरुमा चरम निराशा छाएको हुँदा केही दिनअघि विद्यार्थी र पत्रकारहरुले नयाँ शक्तिसँग सम्बन्ध टुटाएर माओवादी केन्द्रलाई नै रोजेका छन् । प्रेस सोसाइटीमा आबद्ध पत्रकारहरु फणिन्द्र फुयाल, देवराज गुरुङ र नवराज बरालले नयाँ शक्ति छाडेको घोषणा गरेका छन् भने विभिन्न पदीय जिम्मेवारीमा रहेका ६० जना विद्यार्थी नेताहरुले समेत नयाँ शक्ति त्यागेका छन् । ती विद्यार्थी नेताहरुले मुलुकको समृद्धिका लागि भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिलाई रोजेको बताउँदै आफूहरु वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणमा अहोरात्र खटेको उल्लेख गरेका छन् । तर, नयाँ शक्तिको सोच, शैली र संगठनमा कुनै नयाँपन नदेखिएको हुँदा आफूहरु पुनः माओवादी केन्द्रमै फर्किनु परेको ती विद्यार्थी नेताहरुले बताएका छन् । नयाँ शक्ति त्यागेर माओवादी केन्द्रमा फर्किनेहरुमा ओमकुमारी गुरुङ, युवराज दाहाल, सुमन आचार्य, मुकुन्द कार्की, कृष्ण भट्टराई, शिव भट्टराईलगायत ६० जना रहेका छन् ।